ICloud waa mid aad loo jecel yahay maalmahan. Waa adeeg waxtar leh in badbaadin karo, loo ilaaliyo faylasha aad iyo kaa caawin doonaan inaad la wadaagto asxaabtaada. Waa arrin aad u sahlan in ay isticmaalaan iCloud, maxaa yeelay, dhammaan qalabka Apple leeyihiin waxaa lagu daray ay OS. Waxaa wax laga xumaado, waxaa jira hal dhibaato. Sida aad u rumaysataan, ugu weyn waa labalaabka xiriiro. Waxaa dhacda in dad badan oo maalin kasta. Waa wax aad looga xumaado iyo waqti. Waxaa wax laga xumaado, Apple diido in ay na siiso '' mid click tirka 'feature'. Taas macnaheedu waa in aad u baahan tahay waqti aad si ay u tirtirto xiriirada labalaabka.
Qaybta 1. tirtirto labalaabka xiriirada ka iCloud mar
Xalka ugu wanaagsan waa in ay ku milmaan xiriirada labalaabka. Marka aad dhamaysid, iCloud u hagaagsan doonaa qalab aad iyo dhammaan tus laga saari doonaa. Waa tutorial sahlan oo u baahan in dhowr daqiiqo oo waqti aad. Dabcan, aad gacanta ka raadin kartaa iyo tirtiri xiriirada labalaabka. Tani waa hab ammaan ah, maxaa yeelay, waxaad eegi kartaa macluumaadka oo dhan, laakiin waxaad u baahan doontaa waqti badan.
Tallaabada ugu horreysa waa in la furo kitaabka cinwaanka on your computer Mac. Waxaad heli kartaa Kitaabka Cinwaanka ka qalab kasta oo macruufka. Haddii aad ku cusub tahay qalabka Apple, in aad ogaato in Kitaabka Cinwaanka waa codsi ah in ka kooban yahay xiriirada oo dhan.
Riix tab Card oo ay doortaan Meel tus ah. Doorashadan waxa ka heli waa in dhammaan dadka ay khuseyso labalaabka ee Kitaabka Cinwaanka. Sidoo kale, waa in aad hubiso xitaa haddii aad u malaynayso in aadan haysan xiriir labalaabka.
Markii geeddi-socodka lagu sameeyo, guji badhanka ku milmaan ah. Tani waxay ku milmaan doonaa dhammaan xiriirada labalaabka. Marka xiga markii u hagaagsan iCloud, waxaa tirtiri doonaa, kuwaas oo xiriir ka qalab kale.
Marka aad dhamaysid, waxaad ku celin karaa habka si aad u hubiso in ay jiraan wax xiriir labalaabka sameeyo. Khubarada ayaa soo jeediyay in aad u hubiyo tus bil ah ugu yaraan hal mar. Tani reebi doonaan qaladaad ay suurtagal tahay, marka aad rabto inaad la wadaagto file ah oo aad saaxiibo. Nasiib wanaag idiin, tani waa hawl fudud in si degdeg ah loo fulin karo.
Qaybta 2. Sidee loo damiyo xiriirada iCloud
Haddii aad qabto dhibaatooyin gaar ah oo aad xiriirada iCloud, iyaga waxaad u tagi kartaa. Waxa kale oo aad iyaga la bilaabi kara, iyaga oo ku leexanaysa daqiiqado yar ka dib. Si kastaba, haddii aad rabto in aad dami xiriirada iCloud, waxaad u baahan doontaa in ay raacaan talaabooyinkan. Tani waa mid aad u fudud oo waxay u baahan tahay oo kaliya dhowr ilbiriqsi.
Tag goobaha oo la helo iCloud ah. Tubada waxa ku si ay u hesho codsiga. Sida aad arki karto, waxaad tirtiri kartaa xisaabtaada sidoo. On top ah, waxaad arki doontaa macluumaad aad xisaabta.
Xiriirada waxaa inta badan ku yaala dusha sare ee liiska. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in simbiriirixan goobo yar iyo bidix, oo waxay u rogman doonaa. Marka aad rabto in aad iyaga ugu noqda, kaliya simbiriirixan wareegga si xaq.
Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad tirtirto xiriirada ka qalab aad. Tani waa suurto gal oo keliya haddii xogta aad waxaa laga heli karaa icloud.com/contacts iyo qalabka aad. Waxaad ayan soo celin kara xiriirada la tirtiro, si aad uga taxadar. Haddii aad rabto in aad ku guuleysatey in aad xiriirka la leedahay, kaliya iyaga u noqon on.
Qaybta 3. iCloud oo soo ku daray / synching rabin xiriir la tirtiro si aan iPhone
Muhiimaddu waxaa weeye, iCloud waa wareegga weyn oo ah in uu xiriir la qalabka oo dhan. Wax kasta oo aad badbaadiyo waa ku, waxaa la heli doonaa oo keliya in aad. Sidoo kale, waxaad u soo celin kartaa faylasha iyo xiriirada hadii aad lumiso iPhone ama iPad. Si kastaba ha ahaatee, wax badan oo ka mid ah dadka isticmaala ay cabasho ka iCloud ku daray xiriirro si ay iPhone. Xitaa markii ay tirtirto xiriirada ka iPhone, ka dib markii howleheedii xiriirada, weli waa ay halkan. Sharaxaad waa mid fudud. Waxaad aad xiriir laba meelaha. On aad iPhone iyo iCloud. Marka aad iyaga ka kaliya hal meel tirtirto, ay dib-u-muuqan, maxaa yeelay, aad iPhone iyo iCloud ku xiran yihiin. Nidaamkan waxaa loo yaqaan .Wadashaqayntaas (hagaagsan). Xalku waa in ay tirtirto xiriirada ka, iPhone iyo iCloud iyo iyaga u hagaagsan. Marka aad taas samayn, xiriir aan la rabin in si joogto ah la tirtiro doonaa. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa inay raacaan talaabooyinkan.
Tag goobaha iCloud, via aad telefoon ama Mac oo dami u hagaagsan. Tani waa mid aad u fudud in la sameeyo. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa inay u soo guuraan slide bidixda. Tani iCloud ka '' koobiyeynta '' xiriirada si aad iPhone ka hortagi doonaan. Hadda, waxaad tirtiri kartaa xiriirada aad ka Mac ama u sii.
Log in iCloud oo taga si Xiriirada. Raadi xiriir ah oo aad dooneyso in aad ka saarto oo ay tirtirto. Ku celceli ee dhammaan xiriirada aan la rabin. Waxaad kaloo isticmaali kartaa Amarka ama Ctrl (Windows) haddii aad rabto in aad tirtirto xiriirada kala duwan.
Delete oo dhan xiriirada ka iPhone. Waxaa lagu talinayaa in la sameeyo gurmad ah ka hor inta aadan bilaabin. Sida ugu wanaagsan ee ay tan u sameeyaan waa in ay isticmaalaan Lugood. Waa ay fududahay oo ay jiraan wax badan oo ka mid ah Casharrada ku saabsan sida loo sameeyo tan. Xusuusnow in aad sawiro, fariimaha, wicitaanada iyo faylasha kale ma saameyn doonto marka aad tirtirto aad xiriirka la leedahay. Sidoo kale, xiriirada tirtiray aan laga soo celiyay.
Hadda, u tag iCloud (System rabtid-iCloud) oo taga si xiriir. Riix si aad ku dhigaan. Waxaad arki doontaa suuqa kala pop-up aad weydiinaya ah, ma doonaysaa inaad ku biirto xiriiro. Aqbal iyo sugto dhowr daqiiqo. Markii geeddi-socodka lagu sameeyo, aad iPhone ku milmaan doonaa xiriir la xisaabtaada iCloud.
Haddii aad raacdo tallaabooyinkayga oo dhan, waxaad la kulmi doonaa la xiriiro isku on iPhone iyo iCloud. Tani waa goolkii ugu weyn ee adeega iCloud, in macluumaadka la mid ah oo ku saabsan qalabka oo dhan. Haddii aad xiriirka la leedahay tirtiray mar kale ka muuqan, in aad iPhone, ku celi tutorial oo dhan. Haddii ay mar kale ka muuqan, waa in aad u cusboonaysiiso ama soo celin aad iPhone. Had iyo jeer soo celin iPhone sida qalab cusub. Tani waxay meesha ka saari khatarta ah ee files keeni kara dhibaatooyinka qaarkood. In qaar ka mid ah kiisaska (naadir), macruufka leeyihiin cayayaanka qaarkood oo keeni dhibaatadan. Dhinaca kale, waxaad isku dayi kartaa in aad tirtirto xisaabtaada iCloud iyo inaad mid cusub. Si kastaba ha ahaatee, kaliya tiro yar oo ah dadka isticmaala ayaa sheegay in tani ay ka shaqeeyay iyaga u.
iCloud xirantay: Sida loo dhaafayo iCloud shaqeyn on iPhone
> Resource > iCloud > Sidee ayaan u tirtiri kartaa Contact rabin ka iCloud?